Tuesday March 31, 2020 - 23:28:40 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Fagaare weyn oo kuyaal magaalada Bu'aale xarunta gobolka Jubbada dhexe waxaa ka dhacay xukun dil ah oo lagu fuliyay koox jawaasiis ah oo gacanta lagu dhigay iyagoo la shaqeynayay dowlado shisheeye iyo dhinacyo cadow ah.
Qaadiga maxkamadda wilaayada Islaamiga Jubbooyinka ayaa goob fagaare ah ka akhriyay magacyada 6 jawaasiis ah iyo dambiyada lagu eedeeyay ee sababay in xukunka dilka ah lagu fuliyo.
Wariye ku sugan Jubbooyinka ayaa soo sheegay in Jawaasiista ladilay ay ay ukala shaqeynayeen Mareykanka,Kenya iyo dowladda Federaalka Soomaaliya.
Jawaasiista ladilay qaar kamid ah ayaa mas'uul ka ahaa duqeymo lagu dilay askar iyo saraakiil katirsan Al Shabaab halka jawaasiista qaar gacanta lagu dhigay iyagoo shaqada ku guda jira balse aan wali fulin shirqoolladii uu cadowgu soo maleegay.
Hoos ka akhriso magacyada Lixda Jawaasiista ah ee Bu'aale lagu dilay.
1-Cabdi Caziiz Xasan Heybe
2-Maxamed Daa'uud Jeey
3-Ismaaciil Sheekh Mahad
4-Xasan Ibraahim Max'med
5-Xuseen Macallin Xasan
6-Shuceyb Cabdi Rashiid
Halkan ka dhageyso Qaadiga Maxkamadda xukunka ridday oo akhrinaya xukunnada jawaasiista MP3